सवाल संवाद – SawalNepal
बझाङ – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको अपहरणमा परेकी बझाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद देवकी मल्ललाई केही समयपछि उनीहरुले रिहा गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा सांसद मल्लसँग उज्यालोका बझाङ सहकर्मी डीबी बिष्टले कुराकानी गर्नु भएको छ । देवकीजी, तपाईँ अहिले कता हुनुहुन्छ ? म अहिले यता सुनकुडामा छु । अपहरण भयो भन्ने हल्ला
डा. बाबुराम भट्टराई, संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल नयाँ शक्ति पार्टी गत माघ १५ गतेदेखि देश दौडामा छ । गाउँगाउँमा पुगेर जनताको समस्या जानकारी लिने काम गरिरहेको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले प्रभावकारी
माओवादीमात्रै होइन, एमाले पनि सक्कियो, पछाडि फर्कने ठाउँ छैन
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको ९ महिना पूरा भयो । तर, एकता प्रक्रिया प्रदेशबाट उँधो झर्नै सकेन, किन ? यसका दुईवटा उत्तर छन् । पहिलो, प्रक्रिया अलिक लम्बियो । स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदल निर्माण गर्यो । कार्यदलले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेकै छ । आशा गरौँ, कार्यदल आफैँ निष्कर्षमा पुग्ला । कार्यदलले ल्याएको प्रस्ताव
राष्ट्रपतिबाट आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका भारतका लागि नेपाली राजदुत नीलाम्बर आचार्य केही दिनमै नयाँ दिल्ली उड्दैछन् । ०७४ असोजदेखि नेतृत्वविहीन दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास राजनीति र कुटनीतिमा अनुभवी मानिएका आचार्यले सम्हाल्न लागेका छन् । श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुत रहिसकेका आचार्य पूर्वकानून मन्त्री तथा संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति समेत हुन् । संविधान जारी
डा. केसीलाई जोडेर गगनजी र मलाई नजुधाउनुहोला : योगेश भट्टराई
योगेश भट्टराई, नेता, नेकपा पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीको अनसन चर्चामा छ । आफू र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजिएको भन्दै केसी अनसन बसेका हुन् । यस विषयमा नेताहरुको विचार विभाजित भएको छ । पछिल्लो समय केसीको विरुद्धमा देखिएका नेकपाका नेता योगेश भट्टराईसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो
चीनबाट नेपाल आएर कपडा पसल खोल्ने २० बर्षीय युवती, ५०० मा ब्ल्यांकेटदेखि ज्याकेटसम्म (भिडियो)
काठमाडौँ : नेपालमा चीनको सरसामान खासै ब्रान्डेड मानिदैन । चीन बाहेक बेलायत, थाइल्याण्ड, जापानको सरसामान जतिनै गुणस्तरीय हिन भएता पनि गुणस्तरको मानिने तर चाइनिज सरसामान भने जति नै गुणस्तरको भए नि गुणस्तरीय हिन मानिन्छ। नेपालीहरु मार्फत ‘मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन’ भनेर चाइनिज सरसामानको गुणस्तरमा मजाक पनि नबनेको होइन। यस्ता चुनौतीलाई पार गर्दै
लक्की शेर्पाको बयानः मसँग ३ करोड भए बैंकमा राखेर खान्थेँ नि (अन्तर्वार्ता)
लक्की शेर्पा, अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत । आफ्नै सहयोगीलाई ठगेको आरोपमा यतिखेर उनी चर्चामा छिन् । यद्यपी शेर्पाले भने आफूले राम्रो काम गर्न खोजेपछि केही समूह योजनाबद्धरुपमा आफूविरुद्ध लागेको दावी गर्छिन् । लक्कीका सहयोगीले भने उनीमाथि पैसा ठगेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । नेपाल सरकारमाथि उनीलाई बर्खास्त गर्न समेत ठूलो दबाब परेको छ । यही
‘केटाको घाँटी र आँखा देख्दा सेक्स चाहना जाग्छ’
सेक्स संसारको सबै भन्दा चासोको विषय हो । यसका विषयमा मान्छे बोल्न धकाए पनि चासो पनि भित्रिरुपमा रहेको नै पाइन्छ । सेक्सलाई मानिसले विभिन्न परिभाषा दिएर व्याख्या गर्छन ।यहि विषयमा अहिलेकी चर्चित मोडल एनि कुँवरको धारणा चाँहि के छ ? उनीसँगको कुराकानी :- सेक्स के हो ? दुई जना बीचको माया र विश्वास हो ।
अब विधान र पद्धतिभन्दा बाहिर गए दुर्घटनामा परिन्छ
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धालाई सबैले रुचाएकाले मुख्य नेतृत्व र केही छत्रछायामा त्यसको मार पर्न गएकाले महासमिति बैठक लम्बिएको ठोकुवा गर्छन् युवानेता गगन थापा। लम्बिएको महासमिति बैठक छोट्याउन र शीर्षनेतालाई सहमतिमा ल्याउन थापालगायत युवा समूहको भूमिका प्रशंशनीय रह्यो। यद्यपि युवा सक्रिय हुन नसक्दा कांग्रेस यो अवस्था आएको आरोप उनीहरूमाथि लागिरहेको छ। महासमितिको सफलता, भएका सहमति, कांग्रेसको अबको बाटो,
प्रचण्डको सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरैको भूमिका रहेपनि मात्र दुईजना पात्रले हस्ताक्षर गर्ने मौका पाए । नयाँ वानेश्वरस्थितअन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्तामध्येका एक कोइरालाको